Maxaa kusoo kordhay waxyaabihii khilaafka dhaliyay ee shirka madasha wadatashiga qaranka? (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa kusoo kordhay waxyaabihii khilaafka dhaliyay ee shirka madasha wadatashiga qaranka? (AKHRISO)
Shirkii madaxda madasha wadatashiga qaran ee mudooyinkii dambe ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan wax natiijo fiican laga gaarin, iyadoona taasi ay ka dambeysay kadib markii la isku mari waayay qodobo dhowr jeer hore laga heshiiyay, waxaana qodobadaasi kuwa ka midka ah ugu weynaa tirada xildhibaanada Aqalka Sare ka yeelanayo baarlamaanka cusub iyo qaabka tiradaasi loo qeybsanaayo.
Wareegtadii ay dhawaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ku meel-marisay hab-raaca doorashada 2016-ka, ayaa shirarkii ka dambeeyey wareegtadaasi oo dhan markasta waxay noqdeen mid laga hadlo Aqalka Sare, waxaana dooda ugu badan ay ka taagneyd, in gobolka Banaadir uu xubno ku yeesho Aqalka Sare iyo xubnaha dheeriga ah ee loogu daray Puntland islamarkaana looga jaray kuwa Somaliland.
Warar hoose oo ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleyso shirka madasha ayaa sheegaya in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in Aqalka Sare loo daayo tiradii dastuurku dhigaayay ee ahayd 54, kuwaas oo laga saarayo dhamaan xubnihii shirkii u danbeeyey lagu daray ee Somaliland iyo beelaha Banaadiriga ah.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in xubnaha lagu qeybiyey dowlad goboleed 6 ah, taas oo tirada xildhibaanada ka dhigeysa 48, halka 6 xildhibaan ee soo hartay loo kala qeybiyay Puntland iyo Somaliland, sida saddex jeer oo hore lagu heshiiyay.
Dhinaca kale, waxaa maalinta Arbacada ah lagu wadaa in heshiiskaasi si rasmi ah qalinka loogu duugo islamarkaana ay si wadajir ah u saxiixaan madaxda shirka madasha wadatashiga qaran, kaas oo in muddo ah soo jiitamayay.
Si kastaba ha ahaatee, shirkaan oo ah kii ugu dambeeyay oo ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee xilkoodu ka dhamaaday iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaana jirin shir kale oo ay ooga doodayaan arrimo kale, balse waxa kaliya ay madaxdaasi isugu imaanayaan ay tahay inay si wadajir ah u saxiixaan waxyaabihii ay isku af-garteen shirkaas.